I-villa entle elizweni - I-Airbnb
I-villa entle elizweni
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguRosanna
Yimizuzu emi-5 kuphela ngemoto. ukusuka kwisikhululo seenqwelomoya, e Farato, yi villa yethu emhlophe kweli lizwe. Indlu inamanzi nombane. Kukho i-Welan ehlawulelwayo, iTV kwaye ungazipheka ngokwakho. Siyindawo efanelekileyo kuye nabani na odlulayo okanye osebenza apha!
Amagumbi amabini okulala aneebhedi ezimbini kunye neewodrophu zibonelela ngokulala kamnandi kubantu aba-2 ukuya kwaba-4. Igumbi ngalinye lokulala linegumbi lokuhlambela elinendlu yangasese kunye neshawa.
Ukusukela ekupheleni kwe-16 kaOkthobha sihlawule kwangaphambili i-elan kunye nomabonakude wesathelayithi.
4.75 · Izimvo eziyi-22
Kanye ekoneni, kwisitrato esikhulu, kukho ivenkile encinci apho unokufumana isonka esitsha se-baguette (tapa lapas). Idla ngokuvulwa phambi kwentsimbi yesi-7:00 kusasa kwaye usenako ukuthenga izinto ezincinci kude kube ngokuhlwa.
Ukuthenga izinto ezinkulu kungcono ukuya kwidolophu elandelayo, iBrikama, apho kukho ivenkile enkulu, kunye neevenkile ezininzi zasekhaya kunye nemarike enkulu, enemibala ekufanele uyibone.
Umbuki zindwendwe ngu- Rosanna
Ngokwam, ndibakho kuphela ngeeholide zam. Kungenjalo ndihlala eSwitzerland. Umlindi wethu uKuntin kunye nomphathi wethu wendlu uMajar bakwisiza. Nihlala nobabini kwindlu encinci esecaleni. Bobabini bathetha isiMandinka, isiWollof kunye nesiNgesi. Umtshana wam, uKady, akasazi kakuhle isiNgesi. Bonke banobuhlobo kwaye baluncedo.
Kwimeko kaxakeka unganditsalela nge-imeyile.
Ngokwam, ndibakho kuphela ngeeholide zam. Kungenjalo ndihlala eSwitzerland. Umlindi wethu uKuntin kunye nomphathi wethu wendlu uMajar bakwisiza. Nihlala nobabini kwindlu encinci es…